ကျနော်သိတဲ့ မန္တလေး (၃) နှင့် မဟာ့ မဟာ ဆိုင်ကြီးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျနော်သိတဲ့ မန္တလေး (၃) နှင့် မဟာ့ မဟာ ဆိုင်ကြီးများ
ကျနော်သိတဲ့ မန္တလေး (၃) နှင့် မဟာ့ မဟာ ဆိုင်ကြီးများ
Posted by Shwe Zin U on Sep 13, 2010 in Arts & Humanities, Cultures |6comments
ဆရာနီကိုရဲ ဆုံးတဲ့ နေ့က ဒီစာလေး ရေးခဲ့ပါတယ်…။
ဟင်းရည်လေးလည်းကောင်းတယ်တဲ့။ ဝက်နံရိုးနဲ့ ကြံမဆိုင်ဟင်းရည်တဲ့။ ကျနော်လည်း အကြိုက်ဘဲပေါ့၊ အဲဒါဆိုထည့်ဗျာပေါ့။ ဟဲ..ဟဲ အဲဒီတော့ မမက ဟင်းရည်ကလည်း ရောင်းတာဘဲနော် တဲ့၊ ကျနော်လည်း နဲနဲတော့ ကြောင်သွားတယ်။ ကျနော့် ကိုယ် ကျနော် အလကားများ လာတောင်းနေမိ လားလို့ ပြန်စဉ်းစားရသေးတယ်။ ဟဲ..ဟဲ နောက်မှ ငါလည်း လာဝယ်တာပါဘဲလို့ စိတ်ထဲက… စိတ်ထဲက ပြောမိတာ..။
တခါကလည်း စတိုးဆိုင်ကြီး တဆိုင်ဝင်သွားပြီးတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လျှောက်ကြည့်ရင်း အင်္ကျီ တထည့် သေချာကြည့်ချင်တာနဲ့ ညီမလေးရေ ဟိုအင်္ကျီလေး ကြည့်ချင်လို့ လို့ပြောတော့ `အဲဒါ ……….ိ/.နော်တဲ့ ။ ဩ…..အင်္ကျီလေးဝယ်ပြီး ဒင်းတို့ရှေ့ ခြေထောက်ဘဲ သုတ်ပြရမလား၊ ဓါးနဲ့ ဘဲနှတ်နှတ်စင်း ပြစ်ရ ကောင်းမလားလို့…အင်း….စိတ်ထဲက စဉ်းစားတာပါ၊ လက်တွေ့ကတော့ ဟုတ်ပါတယ်လေ။ ငါနဲ့လည်း ဒီအင်္ကျီနဲ့ မတန်ပါဘူးလို့။ အေး အေး မပြပါနဲ့တော့ကွယ် လို့ပြောပြီး ကုပ်ချောင်းကုပ်ချောင်းနဲ့ ပြန်လှည့် ထွက်ခဲ့ရပါကြောင်း၊
အင်း အယ်ဒီတာမင်း ရေ ပြောရရင်တော့ ပုံမှန် လည်း ထူးမခြားနား ဘဲ ကျနော် ကအဝတ်အစား ကို ဝါသနာ သိပ်မပါသလို အရောင် အဆင်းမဲ့ လေ ဝတ်ရတာ အဆင်ပြေလေ မလို့ပါ မန္တလေး ကသိပ်ပူတယ်လေ
အင်း အဝတ်ဆိုတာထက် မြန်မာပြည်က ဈေးရောင်းသမားများက
သူတို့ကိုယ်တိုင် ချမ်းသာနေတာမဟုတ်သေးပဲ အချင်းချင်း နှိမ့်ချကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့်ပါ။
ရှင်းပြတာမျိုးဆိုလည်း ယဉ်ကျေးစွာ နားခံသာအောင် ရှင်းပြတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တစ်ခု လိုနေသေးလို့ပါ။
ဒုတိယတစ်ချက်ကဈေးသည်တွေဘက်က ကြည့်ရင် တစ်ချိုံသောလူလည်လူနပ်တွေက အကြံအဖန်လုပ်တာကို ခံကြရဘူးလို့ပါ။
(ကျနော်မိတ်ဆွေ ကင်မရမင်းလေးပေါ့ 2010သင်္ကြန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်က သူတို့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ ကြဲတာ ကဲတာကို မှတ်တမ်းတင်ဘို့ သုံးရက်အပြီး
ကျပ်တစ်သိန်းခွဲနဲ့ငှားပါသတဲ့ သူတို့အတွက် ကင်မရာတစ်လုံးသီးသန့်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ထားပေးရမယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။
ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ အဲဒီသူဌေးမင်းက X2O ကိုကြောက်လို့မလာပါဘူး။
ပိုက်ဆံရှင်းတော့ သူတို့မလာလို့ဆိုပြီးတစ်ရက်စာ လျှော့ရှင်းပါသတဲ့)
ဒါကြောင့်လဲ ဈေးသည်များကလဲ ကြိုတင်လို့ပြောတာနေမှာပါ ကိုရွှေစင်ဦးရေ။
အရောင်းဝန်ထမ်းတော်တော်များများက အဲ့လိုတွေချည်းပဲထင်ပါတယ် . . .
လှလှပပနဲ့ကော့ကျော့နေရင်တစ်မျိုး ၊ အိမ်နေရင်းပုံစံလေးနဲ့ဆိုတစ်မျိုး မတူကြဘူး . . . အဲဒါဘာလဲမသိဘူးနော် . . .
အင်္ကျီလေးထုတ်ပြခိုင်းတာနဲ့ အဲလိုကြီးပြောတာတော့ မကောင်းဘူးနော်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးခဲ့တယ်။